वनमा बेवारिस भेटिए शिशु:: Naya Nepal
वनमा बेवारिस भेटिए शिशु
सल्यान — शारदा नगरपालिका–२ मैसेपानीनजिकै वनमा सोमबार बिहान एक शिशु बेवारिस अवस्थामा फेला परेका छन् ।
काठमाडौँ — चाडबाड नजिकिएसँगै उडान संख्या बढाउनुपर्ने बेला नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो वाइडबडी विमान १३ दिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्डेड’ भएको छ ।
निगमका एक प्राविधिकका अनुसार उक्त विमान असोज ७ गते मेडिकल कार्गो लिन चीनको कुनमिङ उडानमा रहेका बेला सिन्धुलीको आकाशबाटै फर्किएको थियो । नेपाली नाम मकालु भएको वाइडबडीको दायाँ पखेटामा रहेको फ्ल्यापमा समस्या देखिएको संकेत पाइएपछि पाइलटले उडान रद्द गरेका थिए ।
झन्डै दुई साता बितिसक्दा पनि निगमको इन्जिनियरिङ विभागले जहाज मर्मत गरेको छैन । निगमको वाणिज्य विभागले २ सय ७४ सिट क्षमताको वाइडबडी विमान ग्राउन्डेड भएपछि १ सय ५८ सिट क्षमताको न्यारोबडीबाट उडान गर्नुपरेको जनाउँदै आएको छ । ‘ठूलो जहाज जाने अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा सानो जहाज पठाउनुपरेको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘यसको असर निगमको आम्दानीमा परेको छ ।’
नौ महिनाको अवधिमा यो विमानको फ्ल्यापमा समस्या देखिएको यो तेस्रोपटक हो । यो समस्यामा जहाज उत्पादन गर्ने एयरबसका इन्जिनियरले अनुसन्धान गरिरहेको निगमका एक इन्जिनियरले कान्तिपुरलाई बताए । ‘यो मेकानिकल फेलियर हो । एयरबसलाई जानकारी गराएका छौं । उसले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मंगलबार साँझसम्म स्पेयर्स पार्ट्स काठमाडौं आइपुग्दै छ, बिहीबारसम्म जहाज मर्मत गरेर वाणिज्य विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ,’ उनले भने । निगमले लकडाउनकै समयमा यो विमानको हरेक दुई वर्षमा अनिवार्य गरिने सी–चेक (सम्पूर्ण मर्मत) एक महिनाअघि मात्रै इन्डोनेसियाको जीएमएफ एरोएसिया नामको कम्पनीबाट गरेर ल्याएको थियो । यो मर्मतमा निगमले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अहिले देखिएको फ्ल्यापको समस्या र सी–चेकको सम्बन्धबारे पनि प्राविधिकले अनुसन्धान गरिरहेको इन्जिनियरहरूले बताएका छन् ।
‘सी–चेक र यो फरक विषय हो,’ निगमका एक अर्का अधिकारीले भने, ‘तर पनि हामी यसमा एयरबसको सम्पर्कमा रहेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
कांग्रेसको अवरोधपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित
बुटवल — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । कांग्रेस सांसदहरुले उठेर नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानीका बारेमा विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गरेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका थिए । समिति र विज्ञले दिएको सुझावविपरीत बाहिर सुरक्षा घेरा हालेर संसद्‍मा राजधानीका बारेमा निर्णय गर्न खोज्नु सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति भएको कनौडियाले बताए ।
सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसै प्रस्तावबारेमा सोमबार सदनमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैबीच प्रदेश ५ को नेकपा स‌ंसदीय दलले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई हि्वप जारी गरेको छ ।
संसदीय दलको साेमबार बसेकाे बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले सरकारको निर्णयका पक्षमै मत हाल्न ह्विप जारी गरेका हुन् ।
‘पछिल्लो पटक २०७५ साउन १० गते केसीसँग अहिलेकै सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसी तिनै मागहरूसहित पुन: अनशन बस्दा किन लज्जाबोध भइरहेको छैन? किन उल्टै जिम्मेवार मन्त्री खटाएर सरकार उनलाई गलत देखाउने चेष्टा गर्दैछ?,’ साझा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।